यस पालिको दशैंमा नयाँ नोट साट्न नपाइने” यस्तो क’डा नियम लागु हुदै ! – Life Nepali
काठमाडौं – हिन्दुहरुको महानचाड दशैंको विषेशता राम्रो लगाउने र मिठो खान, ठुलाबडासँग आशिर्वादसँगै दक्षिणामा नयाँ नोट प्रमुख हुन्छ ।राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्षको दशैं लक्षित गरेर ५, १०, २०, ५० र १०० दरका नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको थियो । तर यो वर्षको यसपालीको दशैंमा नयाँ नोट नपाइने भएको छ ।कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनहुँ ब’ढिरहेको हुँदा अघिल्ला वर्षहरुमा झैं राष्ट्र बैंकले दशैंको लागि नयाँ नोट नि’ष्काशन नगर्ने भएको हो । **थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,***
यसअघिका दशैंमा राष्ट्र बैंकले प्रतिव्यक्ति तथा संस्था तोकेर दशैंलाई ल’क्षित गरी नयाँ नोट वितरण गर्ने गरेको थियो । तर यसपाली भने ब’ढ्दो कोरोना भाइसरको संक्रमणका कारण भि’डभाड हुने जस्ता कुनै पनि कार्य नगर्ने सरकारको निर्देशन छ । सो निर्देशनलाई पा’लना गर्दै दशै लक्षित नयाँ नोट वितरण नगर्ने राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘पहिले जस्तो समय तो’केर वा बैंक निर्धारण गरेर दशैंमा नयाँ नोट वितरण यो वर्ष हुँदैन’ ती अधिकारीले भने,
‘यस विषयमा थप छलफल अझै भइरहको छ, असोजको पहिलो सातासम्म आधिकारीक निर्णय गरी सूचना जारी हुन्छ ।’राष्ट्र बैंकले गत वर्षबाट दशैं बाहेक पनि नयाँ नोट आवश्यक पर्नेलाई बैंकमार्फत् वितरण गरिरहेको छ । दशैंमा नोट आवश्यक प’र्नेले अहिलेबाटै सम्बन्धित बैंकबाट सु’रक्षित त’बरले लि’नसक्ने उनले जानकारी दिए । गत वर्षको दशैंमा मात्र राष्ट्र बैंकले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ नयाँ नोट वि’तरण गरेको थियो । हाल ५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ नोट स’र्कुलरमा रहेका छन् ।
Previous कोरोना भ्याक्सिन बनेसङ्गै , सुनको मुल्य ह्वात्तै घट्ने अनुमान ! कति पुग्छ मुल्य ? हेर्नुहोस –
Next आज फेरी ब’ढ्यो सुनको भा’उ” कति पुग्यो तोलामा
3 weeks ago Hemant